Chii chiri Kumisa Masangano kubva mukushandisa Maitiro Ekutengesa Zvemagariro? | Martech Zone
Chii chiri Kumisa Masangano Kubva kuKushandisa MaSocial Strategies Ekutengesa?
Chitatu, December 30, 2015 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Sezvo isu tinopinda muna 2016, masangano achiri kunetseka neayo kutengesa munharaunda mazano. Isu takagovana iyo nheyo dzekutengesa munharaunda mune zvakapfuura zvinyorwa uye hapana kuramba izvo zvakanakira timu inotora tsika dzekutengesa munharaunda:
61% yemasangano anoita zvekushambadzira munharaunda vanotaura zvine chekuita nekukura kwemari, izvo zvinodarika makumi maviri muzana kupfuura vatengesi vasiri vezvemagariro!
Nemhando dzema stats, iwe ungafunga kuti sangano rega rega rinenge riri kutora kutengesa kwevanhu senzira yepamoyo… asi hazvisi nyore.
72% yevashandi vekutengesa vanonzwa kuti havana kugona kutengesa munharaunda
Matambudziko makuru ekutengeswa kwenzanga nekutorwa akaonekwa muongororo yazvino yedata kubva kuSales yeHupenyu. Kusakwana kwekudzidziswa, kushomeka kweiyo ROI kuyera, uye kushomeka kuitisa muzvirongwa zvekutengesa zvakatungamira kumabhizinesi ari kunetseka kuita zvirongwa. Ruzhinji haruna purogiramu yekudzidzira inoshingaira uye nzvimbo uye dzinenge nhatu dzekota dzevatengesi vehunyanzvi havana hunyanzvi mukushandisa zano.
Pakutanga gore rino, takagovana a Yekutanga Yekutungamira kune Yemagariro Kutengesa infographic kubva kuSalesforce. Ehezve, marongero ako anofanirwa kuve neakanyanya kudzikira kutarisisa tarisiro yako yevateereri, kuvaka chiremera chako, uye kuenda pamberi pevamwe vatungamiriri vanokodzera.
Tags: 2016mhinduro dzemaitirovanhukutengesa kwehupenyusandler kudzidziswakutengesa munharaundamunharaunda kutengesa infographickuona